कन्चनको घरमा पुगे रवि लामिछानेको मुद्दा ल ड्ने वकिल , के अब कन्चनले न्याय पाउलान् ? अब के हुन्छ ? (भिडियो सहित) – Classic Khabar
March 12, 2021 210
सामाजिक सञ्जालमा दुई महिना देखि कञ्चन र अनिषाको बारेमा निकै चर्चा भएको छ । दुई महिनाको उपचारवाट पनि कञ्चन निको हुन सकेनन् । आइतवार उनको नि`धन भएको छ । लामो समय उपचार गराउँदा पनि उनको स्वास्थ्यमा चाहेजस्तो सुधार आउन सकेको थिएन ।तर पनि चिकि`त्सकले उनलाई निकै बचाउने प्रयास गरेका थिए । धेरै दिनको बे हो`सी अवस्थावाट उनी उनी केही दिन अघि बोल्न सक्ने भएका थिए । तर पछिल्लो समय उनलाई फेरी निमोनिया भएको कारण अवस्था विग्रिएको हो ।
उनको हात खुट्टा समेत चल्न बन्द भएका थिए । यसैले थेरापी पनि सुरु गरिएको थियो । काठमाडौवाट गएका विशेषज्ञ टोलीले उनको उपचार गरेको थियो । आफुले माया गरेको मानिसलाई पाउन नसक्दा कञ्चनले आफैलाई स जा य दिएका थिए । नेपालको कानुन अनुसार उनीहरुको प्रेम र विवाह गर्ने उमेर भएको थिएन ।सानै उमेरमा प्रेममा परेका उनीहरुले विवाह त गरे तर त्यो विवाह लामो समय सम्म टिक्न सकेन । चितवनवाट काठमाडौ पुगेर कञ्चनको आमाको अगाडी विवाह गरेको भोलीपल्टै बेहुलीले आफ्नो माइतीको द`वावमा कञ्चनलाई आफुले प्रेम नगरेको बताइदिइन् ।
उनलाई प्रहरी कार्यालय लगियो । प्रेमिकावाट अलग गराइयो । त्यसपछि उनीहरुको सम्बन्धमा परिवर्तन आयो ।त्यो सबै अवस्थाको सामना कञ्चनले सहन सकेनन् कोठामा फर्किएर वि ष खा ए । करिब दुई महिनाको उपचार पछि उनको नि`धन भयो । आमाले एक्लै हुर्काएको छोरा गु`माउनु परेपछि उनको अवस्था निकै बे`हाल भएको छ । जिवनको एक मात्र सहारा ति आमाले गु`माएकी छन् । श्रीमानको सहयोग समेत नपाएकी कञ्चनको आमाले एकमात्र सहारा रहेका छोरा पनि गु मा उनु परेको हो ।छोरा गुमाएपछी कन्चनको मामी एक्लै क्री`या बस्नुभएको छ । यसैबीच आज पत्रकार पारष भट्टराईले रवि लामिछानेको मु द्दा ल’डेका वकिललाई कन्चनको घर पुर्याएक छन । अब के होला ? बाँकी भिडियोमा हेर्नुहोला:
Prevसरकारसंग वार्तापछि खुला राजनीतिमा आएको विप्लवलाई फेरी धोका !
Nextमाधव कुमार नेपाल एमालेमा फर्किनुको कारण यति ठुलो प्लान, प्रचण्डले यसरि गरे खुलासा